Xubintii Ciyaaraha iyo cRx Yameni: PSG 3:0 Bayern & PSG fkf Bordeaux? (dhegayso) – Radio Daljir
Xubintii Ciyaaraha iyo cRx Yameni: PSG 3:0 Bayern & PSG fkf Bordeaux? (dhegayso)
Siteenbar 28, 2017 2:37 b 0
Waxa la ciyaaray kulamo ka tirsana koobka Champions League oo ah kan dunida loogu dawashada badan yahay. Dadka xiiseeya kubadda cagta caalamka waxa ay indhaha ku hayeen kulankii ka dhacaya garoonka Parc des Princes ee kooxda PSG.
Kooxda Inter Milan ayaa doonaysa inay dhiggeeda Arsenal kala soo wareegto wiilka Jarmalka u dhashay ee lagu magacaabo Ozil, kaas oo diidan in uu heshiis cusub saxiixo.